ထိပ်တန်း 10 နေရာတိုင်းမှာရထားမြင်းစီးစမတ်သည်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ထိပ်တန်း 10 နေရာတိုင်းမှာရထားမြင်းစီးစမတ်သည်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြန်းကျင်အရအများဆုံးဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပျော်စရာနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျထဲကအကောင်းဆုံးလုပ်ပုံကိုသိရန်လိုအပ် သင့်ရဲ့ခရီး နှင့်စမတ်ဖြစ်. ကောင်းစွာစည်းရုံးနှင့်သင့်ရထားခရီးစဉ်တစ်ဦးအောင်ကိုဦးတည်နေတဲ့ရှည်လျားသောလမ်းဝင်ဘာမှုအရာကိုမသိဘဲခံရ သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်၏မီးမောင်းထိုးပြ သို့မဟုတ်စွန့်စားမှု. ဤအထိပ်တန်းမှာကြည့်လိုက်ပါ 10 ရထားမြင်းစီးစမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ. သင်၏နောက်ခရီးအဘို့ပြင်ဆင်ရမည်.
ထိပ်တန်း 10 ရထားမြင်းစီးစမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ – အကြံပြုချက် ONE: ကြိုတင်ခုနှစ်တွင်သင့်လက်မှတ်ဝယ်ရန်
ထိပ်တန်း 1 ထိပ်တန်း၏ 10 ရထားမြင်းစီးစမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့သေချာပါစေနှင့် ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ယူရန် သေချာသင်ချင်သောရထားပေါ်တွင်ရစေ. သငျသညျမှမရရှိနိုင်ပါစေခြင်းငှါမဆိုအထူးသို့မဟုတ်အထူးလျှော့စျေးနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်သေချာပါစေ. အဘယ်သူသည်အချို့သောငွေချွေတာမချစ်ပါဘူး! သငျသညျနိုင်ပါလိမ့်မည် ပိုက်ဆံနည်းနည်းကယ်တင် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဖြုန်းဖို့.
အကြံပြုချက် TWO: သင့်ရဲ့ခရီးဆောင်သေတ္တာ Stowe
ရထားများအတွက်အကောင်းဆုံးလွယ်ကူသိကောင်းစရာများကိုသင်အမြဲသင့်ရဲ့စစျဆေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ အိတ် သူတို့တစ်တွေကျိုးကြောင်းဆီလျော်အရွယ်အစားများမှာနှင့်လျှင်သင်လည်းထိုင်ခုံအထက်ထိန်သိမ်း၌သူတို့ကိုသိမ်းထားဖို့ရှေးခယျြသို့မဟုတ်နောက်ကျော-to-ပြန်ထိုင်ခုံအကြားတြိဂံအာကာသသို့သူတို့ကိုငါ wedge နိုင်ပါတယ်. သင်တို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်းသင်တို့ဆီသို့နီးကပ်သင့်ရဲ့အိတ်များဒီနည်းလမ်း.
အကြံပြုချက် THREE: သင့်ရဲ့အိတ်နှင့်အတူစမတ် Be
ကျနော်တို့တိုင်းရထားသူတို့ရပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းမှာလူးလာပွေးမှသူခိုးအဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဟုကြသည်မဟုတ်, မဟုတ်ဘဲအပေါ်ဖြစ် ဘေးကင်းလုံခြုံခြမ်း. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိတ်မှကြွလာသောအခါနိုးနိုးကြားကြားဖြစ်. ထိုးထွင်းသိမြင်မှုထက်ရထားကားတစ်စီးရဲ့အဆုံးမှာသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထား. သင်တစ်ဦးကျောပိုးအိတ်ရှိပါကသင်သည်လည်းအပိုလုံခြုံဖြစ်ရန်အတွက်အိတ်ထိန်သိမ်းဖို့သင့်ကြိုး clip နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျရထားခရီးသွားဘို့ငါတို့ယခင်လွယ်ကူသိကောင်းစရာများအသုံးပြုရှိပါက တစ်ဦးထိုင်ခုံ reserved သင်တို့ရှိသမျှသည်ခွဲခြားပေးသည်. သင်သည်သင်၏အရပ်မှဖြောင့်သွားနိုင်ပါတယ်. အကယ်. မရ, သင်သည်မည်သည့်ကွှငျးမဲ့ထိုင်ခုံတောင်းဆိုကြိုဆိုကြသည်. ဤအမရရှိနိုင်အများအပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, အမတ်နေရာအထက်တွင် posted ကြိုတင်စာရင်းသွင်း tags များဒါမှမဟုတ်အခန်းတံခါးများကိုစစ်ဆေး. အဆိုပါ tags များထိုင်ခုံအဘို့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်သောခရီး၏လမ်းပိုင်းကိုပြသ. သူတို့ကအစပိုင်ရှင်ပင်ရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီသင်အပေါ်ကိုချွတ်ရတဲ့လျှင်ပြသသောထိုင်ခုံကိုယူမှအခမဲ့များမှာ.
အကြံပြုချက် FIVE: ပညာရှိရှိရထားအချိန်ကိုသုံးပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးဖို့ရထားခရီးစဉ်အပေါ်သုံးစွဲအချိန်ကိုသုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ. သင်သည်သင်၏လာမည့် destination သည်များအတွက်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီအချိန်ကိုသုံးပါ, သင်၏နောက် destination သို့လမ်းညွန်စစ်ဆေး. သင်၏ဓါတ်ပုံများမှတဆင့် Go, သင့်ရဲ့စည်းရုံး ခရီးသည်ပခုံးပိုးအိတ်, သင်အချိန်ရှိသည်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ connection ကိုကို double-စစ်ဆေးဒါမှမဟုတ်သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြားမည်သည့်တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်. သင့်ရဲ့ခရီးကဒီကိုလည်းမြင်ကွင်းများအချို့အတွက်ယူမယ့်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကြာကြာဖြစ်တယ်ဆိုရင်.
ရထားဖြင့် Nice သို့ Lyon လေဆိပ်
အချိန်နှင့်ငွေကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားအသုံးပြုရထားအဘို့ဤလွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများနှင့်ဘူတာရုံမှာသူမြားကိုသုံးပြီးဆန့်ကျင်အဖြစ်ရထားပေါ်တွင်ရေချိုးခန်းကိုသုံးပါ. ရထားအိမ်သာများသောအားဖြင့်အဆုံးတွင်တည်ရှိသည် ကားများ နှင့်မကြာခဏဘူတာမှာအိမ်သာထက်အများကြီးသန့်စင်များမှာ, အဖြစ်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း.
အဖျား7ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းထဲက 10 ရထားမြင်းစီးစမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ, ယင်း၏အချို့မှပြောနေတာထက်တစ်မြို့သို့မဟုတ်နိုင်ငံအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းဆိုတာဘာလဲ ဒေသခံတွေ, သငျသညျသွားကြသည်အရပ်ခဲ့ကြပေမည်သူကိုသို့မဟုတ်အခြားခရီးသွားများအတွက်? သူတို့ကသင့်ရဲ့များ၏ ins နှင့်တနေရာကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည် ခရီးလမ်းဆုံး ပြုဖို့နဲ့ဘာလုပ်ဖို့မအဘယ်အရာပေါ်တွင်သင်အကြံပေး. မေးခှနျးမေးခြင်းအားဖြင့်ရေခဲကိုချိုးဖောက်ကြိုးစားပါ, သင့်ရဲ့ဇာတိမြို့ကနေချိုမြိန်သို့မဟုတ်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း.
ခရီးသွားလာဆာလောင်မွတ်သိပ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးသင်ရထားပေါ်တွင်ကြသောအခါပေါ်ရေစာတစ်ခုခုထုပ်ပိုးချင်ပေမည်. သငျသညျဒေသခံတစ်ဦးစူပါမားကတ်သို့မဟုတ်အသင့်စားဆိုင်မှာသင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာအပေါ်တက်စတော့ရှယ်ယာဒါမှမဟုတ်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် စပျစ်ရည်ကိုအိမ်အောက်ခန်း သင်ရထားပေါ်တွင်ခုန်မတိုင်မီ; အများဆုံး မီးရထားဘူတာ ဤအရာကအနည်းဆုံးတဦးတည်းရှိတယ်. အဆိုပါ ရထားပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အစားအစာ သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထိုင်ခုံများအတွက်ပေးဆောင်နေကြမဟုတ်လျှင်မကြာခဏ Bland နှင့်ပိုပြီးစျေးကြီးသည်.
အကြံပြုချက်ကိုး: အဘယ်မှာရှိဟာ Off Get ရန်ကိုသိရ
ရထားခရီးသွားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလွယ်ကူသိကောင်းစရာများတဦးဖြစ်သည့်ဘူတာရုံကိုသိရ. သင်တစ်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ရောက်လာသည့်အခါသင့်လိုရာခရီးရဲ့နာမကိုအမှီနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်း၏အမည်ကိုဖေါ်ပြခြင်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူအများအပြားဆင်ခြေဖုံးဘူတာမှာကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, သငျသညျဗဟိုဘူတာရုံရောက်ရှိသည်အထိဒါပေမယ့်ချွတ်ခုန်ကြဘူး. သငျသညျအစဉ်အမြဲသူချင်းခရီးသည်ကိုမေးသို့မဟုတ်နောက်ထပ်အကူအညီနဲ့ဘို့သင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်စစျဆေးနိုငျ.
အကြံပြုချက်ဆယျ: အမြဲတမ်းဒေသခံရထား Etiquette ကိုသတိရပါ
သရုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုကအခြားခရီးသည်များသည်သင်၏ရထားကားထဲတွင်၏မှတ်ချက်ကိုယူ. သူတို့တိတ်ဆိတ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဝတ်စုံအတိုင်းလိုက်နာရန်သေချာစေပါ. ကလူအိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ထံသို့လာဘယ်မှာသင်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောဆိတ်ငြိမ်တဲ့ကားထဲတွင်ထိုင်နေကြတယ်ကြောင်းညွှန်ပြစေခြင်းငှါအရိပ်လက္ခဏာထွက်သည် Watch. သငျသညျထိုငျလကျြရှိရာအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်အသံကျယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့မကြိုးစားကြ. များလွန်းသည်သင်တို့ထံကဖြတ်ပြီးထိုင်ခုံပေါ်သင်၏ခြေငြိမ်ဝပ်စွာနေဖို့မသခြော Be, မင်းမရှိရင် ဖိနပ် သွား.
သင်တို့သည်ဤထိပ်တန်းသတိရခဲ့လျှင် 10 ရထားမြင်းစီးစမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများငါတို့သည်သင်တို့တစ်စူပါခရီးစဉ်နှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအကြီးအတှေ့အကွုံမြားကိုအာမခံ. သင်ပင်အချို့သောသစ်ကိုဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အချို့သောမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်စေခြင်းငှါ! ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ရေးခရီးသွားလာမှုမှကြွလာသောအခါဘာမှဖြစ်နိုင်. သင်တို့သည်ဤကျွမ်းကျင်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်စဉ်းစားပါ Bernina Express ကို နှင့်ပိုပြီး!
– သငျသညျထိပ်တန်းပေါ်မှာငါတို့ post ကိုကြိုက်တယ်လိုလျှင် 10 ရထားမြင်းစီးစမတ်များအတွက်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ, ဒါကြောင့်မျှဝေဖို့အခမဲ့ခံစားရ, ကျနော်တို့ဤ blog post ကိုကိုအောက်တွင်ခွဲဝေမှုအဘို့ခလုတ်တယ်.
ရထားစီးနင်းယူဖို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံဘွတ်ကင်လုပ်ရန်မှာမဆိုဘွတ်ကင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ကြဘူး – www.saveatrain.com
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/top-10-easy-tips-for-train-riding-smart?lang=my - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
အကြံပေးချက်များ traintip ရထားခရီးသွား